Wealthbar Vs Wealthsimple Review 2022: Goobta Maaliyadeed ee Shakhsi ahaaneed ee ugu Fiican - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Dib-u-eegista Wealthbar Vs Wealthsimple 2022: Goobta Maaliyadeed ee Shakhsiyeed ee Ugu Fiican
Markay timaaddo samaynta go'aamo maaliyadeed oo waaweyn, marmarka qaarkood waxaa nagu soo qulqulaya doorashooyin kala duwan oo maalgashi oo noqda xoogaa xad -dhaaf ah.
Nasiib wanaag annaga, waxaan leenahay mareegaha kala duwan iyo aalado kala duwan oo naga qaada dhammaan culeysyada marka ay timaaddo doorashadaan.
Haddii aad tahay wax aniga oo kale ah, inta maal gelinta iyo samaynta lacag ayaa i farxad gelisa, waxay sidoo kale igu kalliftaa qarka waallida markaan rabo inaan eego xulashooyinka maalgashi ee kala duwan oo u muuqda kuwo soo jiidasho leh.
Waad ku mahadsan tahay bogagga sida Maalqabeenimo iyo Barta maalka (Maalgelinta Tooska ah ee CI). Waxay hoos u dhigaan xulashooyinka waxayna naga caawiyaan xulashada ikhtiyaarrada maaliyadeed ee ugu fiican oo waliba ku habboon miisaaniyadeena.
Si kastaba ha noqotee, labadan websaydh ee cajiibka ah, way adkaan doontaa in la doorto midka la adeegsanayo…
Waxaan kaa caawin doonaa inaad go'aansato goobta kuugu fiican adiga!
Joogso! Waxay noqon doontaa fuulitaan xiiso leh!
Waa maxay Wealthsimple?
Wealthsimple waa maareeye maalgashi oo ku saleysan webka kaas oo isku dara farsamada casriga ah iyo talooyin maaliyadeed oo xirfadeed. Waxay ku siinayaan ikhtiyaarka ah inaad ku maal gasho faylalka la maareeyay (Wealthsimple Invest), ganacsi is-hago (Wealthsimple Trade), ama koonto kayd oo dulsaar sare leh (Wealthsimple Save) (Wealthsimple Save). Waxay jireen ilaa 2014 waxayna hadda maamulaan hanti ka badan $ 3 bilyan.
Waxay ku bilaabeen inay siiyaan maalgelin caqli badan oo toos ah iyadoon laga qaadin ajuurada sare iyo xisaabta ugu yar ee la xiriirta maareynta hantida caadiga ah.
Tiknoolajiyadooda ugu sarreysa waxay kaa caawineysaa inaad kasbato soo-celinta ugu wanaagsan ee suurtogalka ah adiga oo yareynaya biilkaaga canshuurta adiga oo ku maal-gelinaya lacagtaada maaliyado kala duwan oo caalami ah oo kala duwan
Tani waxay ka dhigan tahay inay samayn karaan waxyaabo ay ka mid yihiin isu-dheelitirnaan otomaatig ah, dib-u-maalgelinta saami-qaybsiga, iyo goosashada cashuur-dhimista, kuwaas oo hore u heli jiray dadka aadka u hodanka ah ama aad u waqti-lumis iyo caajis u ah dadka intiisa badan inay kaligood sameeyaan.
Waa maxay Wealthbar (Maalgelinta Tooska ah ee CI)?
British Columbia iyo Ontario, Wealthbar waa maamule maaliyadeed oo shati haysta iyo wakiilka caymiska nolosha oo buuxa. Waxay naftooda u xayaysiiyaan inay bixiyaan maalgelin tayo leh oo onlayn ah oo qiimo jaban. Waxay gacanta ku hayaan in ka badan $ 275 milyan oo kaash ah.
Iyada oo leh keydin toos ah oo internetka ah iyo ilaha maalgashiga, iyo sidoo kale talo maaliyadeed oo farahaaga ah, Wealthbar ayaa kuu fududaynaysa inaad horumariso mustaqbalkaaga maaliyadeed. Adeegyadooda ayaa kaa caawiya:
Kaydinta mustaqbalkaaga si sahlan iyadoo la adeegsanayo faylal -xirfadeed ay maamulaan oo ku habboon ujeeddooyinkaaga.
Kaydinta dulsaarka sare, waxaad lacagtaada ku shubi kartaa gujinta badhanka.
Helitaanka jawaabaha lacagtaada; su'aalaha mar kasta iyo meel kasta oo aad rabto, si aad u gaarto go'aanno xog -ogaal ah.
Talooyinka maaliyadeed iyo qorshayaasha hawlgabka ayaa lagu daray lacagtii aad hore u yareyd, si aad isugu diyaariso mustaqbal wanaagsan.
Isbarbar dhiga u dhexeeya Wealthsimple iyo Wealthbar
Wealthsimple Invest iyo WealthBar waxaa loogu yeeraa "la-taliyayaal robo," taas oo macnaheedu yahay in maalgelintaada lagu maareeyo algorithms loogu talagalay in lagu wanaajiyo soo noqoshadaada.
Shirkadaha la -talinta maaliyadeed ee dhaqameed, ayaa dhanka kale, u adeegsada aadanaha si ay u maareeyaan hantidaada. La-taliyayaasha Robo waxay si joogto ah isugu dheelitiraan faylalkaaga, iyagoo wax ka beddelaya isku-darka maalgashiga iyagoo iibsanaya oo iibinaya guryaha, kuna saleysan dulqaadkaaga halista.
ETF -yada waxaa lagu daray faylalka labada Wealthbar iyo Wealthsimple. ETF -yada, oo ay ku jiraan miisaaniyada wadaagga ah, waxay u adeegaan sidii hanti -dhawryo kale duwan.
Farqiga ayaa ah in lacagaha wadaagga ah ay si firfircoon u maamulaan shaqsiyaad, halka ETFs ay u hoggaansamaan xeerar adag oo la qeexay bilowgii. Sababtoo ah qiimahooda hoose ee hoose, ETFs waxay higsanayaan inay si dhow ula socdaan suuqyada oo dhan waxayna aad uga raqiisan yihiin inay wax ku iibsadaan marka loo eego miisaaniyadda la wada leeyahay.
Labadaba adeegyadu waxay kuu dhisi doonaan faylalkaaga oo ay ku jiraan ETF-yada daboolaya curaarta shirkadaha, saamiyada Mareykanka, kaydka shisheeye, kaydka Kanada, curaarta wax-soo-saarka sare, hantida maguurtada ah, dammaanadaha dowladda, iyo guryaha kale.
Iyada oo la adeegsanayo Wealthbar ama Wealthsimple, wax fikrad ah kuma yeelan doontid maaliyadda/maalgelinta gaarka ah ee aad rabto.
Noocyada xisaabaadka ee laga helo labada shirkadood ee lataliyayaashu waa isku mid. Labaduba waxay bixiyaan RRSPs, TFSAs, iyo RESPs, iyo sidoo kale xisaabaadka kaydka guud, RIF/RRIFs, xisaabaadyo aan diiwaan gashanayn, iyo LIRAs, iyo xulashooyin kale.
Wealthsimple Invest iyo WealthBar sidoo kale waxay leeyihiin baloogyo gudaha ku jira oo ay ku jiraan hanti badan oo talo maaliyadeed iyo maalgelin ah.
Labada gooboodba badiyaa waxay leeyihiin bogag "su'aalo guud" oo dhaadheer kuwaas oo ka jawaaba su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan sida adeegyadooda u shaqeeyaan. Labada shirkadoodba waxay leeyihiin codsiyo casri ah oo bixiya qaar badan oo ka mid ah astaamaha mareegahooda.
Shuruudaha iyo Hababka Maalgelinta
Labada Wealthsimple iyo Wealthbar labaduba waxay kuu oggolaanayaan inaad furato koonto lacag la'aan ah, laakiin midkoodna ma bilaabi doono maalgelinta ilaa aad ugu yaraan $ 1,000 ku leedahay koontadaada.
Adigoo adeegsanaya degelkooda ama barnaamijkooda moobiilka, waxaad kuxiran kartaa koontadaada wax lagu qoro oo aad lacag ku soo gasho gudaha iyo dibedda. Waxaad haysataa ikhtiyaarka inaad samaysato deebaaji hal mar ah ama soo noqnoqda. Waxay qaadataa dhowr maalmood in labada adeegba ay ku dhajiyaan (dalbadaan) lacagta aad ku shubtay koontadaada.
Badbaadada iyo Amniga
Wealthbar iyo Wealthsimple labaduba waxay mudnaanta siinayaan badbaadada hantidaada.
Labada adeegba waxay ku tiirsan yihiin ilaaliyeyaasha dhinac saddexaad (shirkado dhab ahaan haya hantida) kuwaas oo ay caymis ku yihiin Sanduuqa Ilaalinta Maalgashiga Kanada (CIPF).
Dhacdada lama filaanka ah ee mid ka mid ah ilaaliyeyaashan uu musalafay, kaydkaagu (laakiin aan ahayn qiimahoodii) ayaa daboolaya ilaa $ 1 milyan.
Farqiga u dhexeeya Wealthsimple iyo Wealthbar
La -taliyayaal Maaliyadeed
Haddii aad ku qarashgareyso $ 100,000 ama ka badan Wealthsimple Invest, waxaad u cusbooneysiin kartaa qorshaha Madow, oo ah koonto qaali ah.
Waxaa ka mid ah kulan qof-qof ah oo sanadle ah oo lala yeesho la-taliyaha maaliyadeed ee Maal-gashiga Wealthsimple Invest, iyo sidoo kale faa'iidooyin kale oo ay ka mid yihiin marin-u-helka VIP-da ee garoomada diyaaradaha qaarkood.
Waxaad furi doontaa Wealthsimple Invest Generation oo waxaad heli doontaa talo dhaqaale “mar kasta oo aad u baahato” haddii aad maalgashato in ka badan $ 500,000.
Kulamada hordhaca ah ee bilaashka ah, WealthBar waxay kula mid tahay la -taliye maaliyadeed oo ruqsad haysta si dib loogu eego xaaladdaada. Macaamiisha ayaa la sheegay inay ka helaan la -talin joogto ah lataliyaha si ay u ilaaliyaan qorshayaashooda maaliyadeed, sida laga soo xigtay website -ka shirkadda.
Labada Wealthsimple iyo Wealthbar labaduba waxay qaadaan khidmad maamul iyadoo ku xiran qiimaha faylalkaaga. Lacagtaada oo hoos u dhacda, inta badan waad maalgashanaysaa.
$ 150,000 ee ugu horreeya ee la maalgashado, CI Maalgelinta Tooska ah / Wealthbar waxay ku dallacdaa 0.60 boqolkiiba sannadkii, 0.40 boqolkiiba sannadkiiba $ 350,000 ee xiga, iyo 0.35 boqolkiiba sannadkii lacag kasta oo dheeraad ah.
Haddii aad ku bixiso wax ka yar $ 100,000, waxaad bixin doontaa 0.50 boqolkiiba sanadkii, haddii aad maal gashato $ 100,000 ama ka badan, waxaad bixin doontaa 0.40 boqolkiiba sanadkii. Maalgashadayaasha ayaa sidoo kale lagu soo oogi doonaa Saamiga Kharashka Maaraynta (MER) ee ETF -yada ku jira boosaskooda.
Ururinta Wealthsimple ee ETF -ku waxay aad u hooseysaa khidmadaha MER, celcelis ahaan qiyaastii 0.20 boqolkiiba, marka la barbar dhigo CI Direct Investing qiyaastii 0.26 boqolkiiba ilaa 0.34 boqolkiiba.
Adeegyada Wealthsimple Invest iyo WealthBar aad bay u dhow yihiin. Farqiga ugu weyn ayaa ah in WealthBar ay u baahan tahay $ 1,000 maalgashi ugu yar si ay u bilowdo, halka Wealthsimple Invest aysan sameynin.
Haddii aad maalgashato wax ka yar $ 100,000, khidmadaha Wealthsimple Invest ayaa aad u hooseeya, laakiin khidmadaha WealthBar ayaa noqda kuwo soo jiidasho leh marka aad dhaafto $ 500,000 oo ah xadka maalgashiga.
Wealthsimple waxay leedahay wax badan oo ay ku sheegto kuwa doonaya inay isku daraan maalgashiga otomaatiga ah iyo adeegyada kale oo ay ku jiraan koontada kaydka iyo ka ganacsiga saamiyada.
Macaamiisha maal -qabeennada ah waxay u socdaan sidii ay u heli lahaayeen qiime ka sii dheer macaamiisha Wealthbar, in kasta oo xaqiiqda ah in adeegyadeeda dheeraadka ah ay hadda yihiin kuwo raashin ah.
Iyada oo taas la leeyahay, Haddii aad aniga oo kale tahay (hadda uun ka bilawdo ciyaarta maalgashiga) oo aadan haysan lacag badan oo aad kaydiso xilligan, markaa waxaan aad ugu talin lahaa WealthSimple.
Maalgelinta Tooska ah ee CI
Wealthsimple VS. Wealthbar: Isbarbardhigga 2022
Maalgelinta Lacagta Kanada 2022 | Tilmaan-Talaabo Tallaabo-fudud ah oo Fudud
Dib -u -eegista FreedomPop 2021: FreedomPop Runtii ma Xorbaa mise Waa Fadeexad Cusub?
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay xanaaqa ku saabsan adeeg bixiyaha taleefanka gacanta ee cusub oo bixiya hadal bilaash ah, qoraal,…
Dib -u -eegista Bilaabista Ganacsiga Buug -hayaha 2022: Ma u Qalmaa? | Sida ay u shaqayso
Dad badan ayaa sheegaya in Ben Robinson's Bookkeeper Daahfurka uu yahay koorsada xisaabinta ee ugu fiican khadka, laakiin tani ma runbaa?…
Spotify Premium ma u qalantaa? Sidee U Shaqaysaa
Spotify Premium ma u qalantaa? Su'aal gambaleelka garaaceysa maskaxda qof walba marka uu maqlo…